Nhọrọ dị iche iche nke sava | ECommerce ozi ọma
Nhọrọ dị iche iche na ihe nkesa
para mee ka ebe nrụọrụ weebụ anyị na-agba ọsọ anyị na-ezute ihu ọma nhọrọ atọ mgbe ị na-ahọrọ ihe nkesa: Nwe, kwụọ ụgwọ na n'efu. Anyị na-ewetara uru na ọghọm dị na nke ọ bụla n’ime ha ka ị nwee ike ịhọrọ nhọrọ dabara gị mma:
1 Onwe ya:
2 Lezienụ Server:
3 Ihe Nweta
Ọ bụ nke dị n'ime ị wụnye akụrụngwa n'onwe gị na ntọala gị ma jikwaa usoro ngwanrọ na nchekwa
Uru: Have nwere ike ịchịkwa ihe niile akụkụ nke ebe nrụọrụ weebụ gị. Site na mpụta gaa na ikike peeji gị ga-anabata ndị ọbịa. N'echiche a, ị nwere ike ịlele dị ka ihe ịchọrọ nke ibe gị wee gbanwee. Site na ịghara ịdabere na sava ọzọ dị na mpụga, emetụtaghị gị ma ọ bụrụ na mwakpo buru oke ma ọ bụ na enwere nsogbu.
ọghọm: Ọ bụ ego nwere ike ịbụ siri ike imeli maka mmalite ebe ọ bụ na ọ na-ewepụta usoro nke ụgwọ na-apụtachaghị ọnụ. Dịka ị bụ naanị maka ọrụ ziri ezi nke ibe gị, ị ga-enwerịrị otu ndị na-enye aka na ndozi maka ngwanrọ na ngwaike ahụ. Ka azụmahịa gị na-eto, ị kwesịrị itinye ego na akụrụngwa ka mma iji zere usoro mkpọka ma ọ bụ malfunctions.
Ọ bụ nke dị n'ime anyị na-ewe ọrụ nke ejiri ihe nkesa na mpụga gbazitere anyị ebe a ga-achọta ozi nke weebụsaịtị anyị.
Ventajas: Ọ bụ nhọrọ akụ na ụba Ma anyị ekwesịghị ichegbu onwe anyị gbasara ihe ngwaike ma ọ bụ ntinye ngwanrọ. Ha na-esonyere ha na usoro nchekwa na mgbasa ozi.
Ọghọm: Enwere mmachi gbasara ọnụọgụ ozi anyị nwere ike ijikwa ma anyị nwere ike imetụta ma ọ bụrụ na ọgụ dị na sava anyị.
Yiri nke akwuru ugwo, mana ya na odi iche na adighi ike n'ihe gbasara imezi ihe di otutu.
Ventajas: Anyị ekwesịghị itinye ego na ọ dị mma ma ọ bụrụ na anyị na-amalite ma ọ bụ ọ bụrụ na ọ bụ ndepụta nke ihe peeji ikpeazụ anyị ga-abụ.
Ọghọm: N'ezie URL nke anyị ga-enwe ga-enwe aha sava mpụga ma a ga-enwe mgbasa ozi ndị ọzọ na ibe anyị. Na mgbakwunye inwe oke nke ozi iji jikwaa na ịmegharị nhọrọ ole na ole.
Azụmaahịa ọ bụla n'ịntanetị nwere mkpa dị iche iche ma ọ dị mkpa ịmata ihe nhọrọ ndị dị na ahịa ịhọrọ nke kachasị anyị mma. Ọ dịkwa mkpa ịtụle ihe mgbaru ọsọ anyị ogologo oge mgbe ị na-ahọrọ ihe nkesa iji zere njedebe ndị nwere ike imetụta ọdịnihu nke azụmahịa anyị n'ịntanetị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » mba » Nhọrọ dị iche iche na ihe nkesa
Mylọ ahịa m ọ chọrọ ngwa?
Uru nke SSL Asambodo maka weebụsaịtị